Nabadgelyada & Wararka Ilaalinta iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Soo Iibsiga Safarada ugu Fiican Si Aad U Badbaado Waxyaabahaaga
“Ma jirto wax iga lumaya! Dhammaan waxyaabaha aan qiimeeyo waxaan ku keydsadaa meel aamin ah. ”, Ljupka Cvetanova Amaan (oo sidoo kale loo yaqaan khasnad ama khasnad) ayaa ah sanduuq qufulan oo la ilaalin karo oo loo adeegsado in laga ilaaliyo waxyaabaha qaaliga ah tuugada iyo waxyeelada dabka. Ammaanku badanaa waa bustayaal godan ama dhululubo, oo leh hal weji oo la dhaqaajin karo ama la isku daray […]Read More
Hagaajinta Amniga Shirkaddaada Nidaamka Xakameynta Helitaanka
Nidaamka xakamaynta marin u helida: Xakamaynta marin u helka waa xaddidaadda xulashada ee marin u helka goob ama ilo kale oo ku saabsan aagagga amniga jirka iyo macluumaadka halka maamulka marin u helidda uu metelayo geeddi-socodka. Ficilka helitaanka waxaa loola jeedaa soo galid, wax cunid, ama adeegsi. Oggolaanshaha gelitaanka ilaha waxaa loo yaqaan oggolaansho. Noocyada nidaamka xakamaynta helitaanka: Haddii […]Read More
Muxuu Qof U Baahan Yahay Vest Bul Dambe?
Jaakada xabadda celisa: Jaakada rasaasta celiya waa shay hub qarsoodi ah leh oo ka caawiya soo saarista saameynta rasaasta. Waxay yareyneysaa ama joojineysaa in rasaasta jirka u soo dhacdo qoryaha laga rido qoryaha. Waxay kaloo ka ilaalisaa jajabyada yar yar ee walxaha qarxa sida bambooyin gacmeed. Jaakadaha jilicsan ayaa laga sameeyaa dhowr go'yaal oo leh tolmo ama […]Read More
Ku ilaali gurigaaga iyo meheraddaada Kamaradaha CCTV-ga ugu fiican
Waa maxay kamaradda CCTV? Kaamirada CCTV waxay abuuri kartaa sawirro ama duubitaanno loogu talagalay ilaalada ama walxaha kale ee gaarka loo leeyahay. Kamaradu waxay noqon kartaa kamarad fiidiyoow ah ama kamarad aamusnaan dijitaal ah. Adeegsiga ugu weyn ee kamaradda CCTV waa in la qabto iftiinka loona beddelo calaamadda fiidiyowga. CCTV wuxuu u taagan yahay telefishanka wareegga xiran. Hal-abuurnimo […]Read More
Bandhigga Ganacsiga Sare ee Adeegyada Amniga iyo Ilaalinta
Bandhigga Nuclearka & Shucaaca Dunida ee jasiiradda Seoul - 10. Luulyo 2020 Xarunta Shirka iyo Xarunta Carwada ee 'COEX' Carwada bandhigga Nuclearka & Shucaaca Adduunka waa carwada weyn ee ganacsiga nukliyeerka ee Kuuriya. Carwadan ayaa ah mid isgaarsiineed iyo xog ururin ka dhex socota ganacsiga waxayna siisaa shirkadaha soo bandhigaya fursad ay naftooda iyo iyaga […]Read More
Sida loo Iibsado Kaamirooyinka CCTV
Arday ayaa mar yiri: ”Kaamirada CCTV waxay darseen dhaq dhaqaaq kasta oo ardayda; laakiin way ku fashilantay inay daraasad ku sameyso fikradaha kala geddisan ee dhex wareegayay madaxooda! ” In kasta oo dhawaqani run yahay, haddana kamaradaha CCTV waxaa loo adeegsadaa meelo badan oo kala duwan sababo kala duwan awgood! Hadaad mid iibsanaysid, waxaad kujirtaa […]Read More
Alaabooyinka Badbaadada Biyaha iyo Agabyada Ganacsi
Waxaa jira dhowr alaab-qeybiyeyaal kala duwan oo ah badeecadaha badbaadada iyo sahayda ganacsiyada Mareykanka. Waa kuwan qaar ka mid ah kuwa ugu caansan: DEQ - Waaxda Tayada Deegaanka ayaa mas'uul ka ah dhaqangelinta heerarka tayada biyaha ee dhammaan sahayda biyaha dadweynaha ee Mareykanka. Waxay mas'uul ka tahay inay maamusho taxanaha tijaabada biyaha […]Read More